Ithegi: milo | Martech Zone
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Awusoze ufikelele kwi-100% yentengiso emva kokuba umntu ongeze imveliso kwinqwelo yakho yokuthenga, kodwa akukho mathandabuzo ukuba sisikhewu apho kungena ingeniso. Kukho izicwangciso zokuzoba abantu babuyele… ukumaketha kwakhona yenye yazo. Amaphulo okumaketha alandela abantu emva kokuba beyishiyile inqwelo yokuthenga kunye neentengiso zentengiso kubo njengoko betyelela ezinye iisayithi. Ukubuya kuhlala kuyinto entle kumaphulo okuthengisa kwakhona. Nangona kunjalo, emva kokuba benzile
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 27, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Kutshanje siqalile ukusebenza noLuhlu luka-Angie kwaye sele isivule amehlo kuthi ukuba mangaphi amashishini afumana izikhokelo kumanqaku abo, uphononongo kunye nezahlulo. Kumashishini endawo abonelela abathengi babo ngenkonzo enkulu, uphononongo oluhlawulelweyo kuLuhlu luka-Angie yingeniso emsulwa. NgokweSaveyi yoPhando lokuThengisa amashishini amaNcinci yiAmerican Express OPEN, amashishini amancinci aseMelika asengathembela kwilizwi lomlomo njengeyona ndlela iphambili yabathengi yokufumana.
Iingcebiso zokuthenga zaseKhaya zeXesha leeholide
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 9, 2011 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 9, 2011 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Sithumele malunga neMilo, ukufunyanwa kwe-eBay. Injongo kaMilo kukuba nayo yonke imveliso kwishelufa nganye kuwo onke amabali afumanekayo kwiwebhu. Kwaye sele beqhuba iindawo zokuthengisa ngeli xesha leholide! Kukho iingcebiso ezintle apha kunye namathuba okuthengisa ukuthengisa ukuxhasa ukuthengisa kwabo kwangoko ngokuqhuba ukugcwala kwabo kwivenkile yabo kwi-Intanethi. Kuvakala ngathi lixesha lokufudumeza iiJingle Bells kunye necookie zesonka, kwaye uqalise ukuqhuba
Shicilela uLuhlu lweeRetail zakho kwi-Intanethi kunye neMilo
NgoLwesithathu, Novemba 16, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Kwiveki ephelileyo bendithetha noRob Eroh, oqhuba imveliso kunye namaqela ezobunjineli eMilo. UMilo yinjini yokukhangela yokuthenga edityaniswe ngqo kwindawo yokuthengisa (i-POS) yomthengisi okanye ukuCwangciswa kweziBonelelo zoShishino (ERP). Oku kuvumela uMilo ukuba abe yeyona injini yokukhangela ichanekileyo xa kufikwa kumba wokuchongwa kwezinto kuluhlu lwempahla kwingingqi yakho. Injongo kaMilo kukuba nayo yonke imveliso kwishelufa nganye kuwo onke amabali akwiwebhu…
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Kunyaka ophelileyo endikhe ndachitha noPatronpath ibingumbala wokukhwela ngokukhawuleza. Inkampani ikwindawo enkulu yokukhula kwaye iphumelele kakhulu! Siphumelele ibhaso leTechpoint Mira. Silugqibile uphuhliso lokudityaniswa kwe-POS ezi-4- iMicros, iPOSitouch, iComtrex kunye neAloha. Siye saqulunqa kwakhona ujongano lomsebenzisi ukuze sandise ukuguqulwa kwabaxhasi bethu. Songeze ukungabikho komsebenzi kunye neempawu zokhuseleko kwisicelo. Side saphosa kwindawo yokutyela Indawo yethu
Iinkampani ezintathu ezonyulwe ngeTechPoint Mira Awards!
NgoLwesithathu, Aprili 16, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Iinkampani ezintathu endinxulumene nazo ngokusondeleyo zonyulwe njengabokugqibela kwiiMira Awards zaseIndiana: ExactTarget - ngokungathandabuzekiyo ngokukhula kunye nobunkokeli obumnandi ukuba le nkampani iya kuba lilungelo lokufumana ibhaso. Kukho iziqwenga zenkqubo ye-ExactTarget ethi ichasane nemithetho yefiziki ngokukhawuleza ukuba bangavelisa kwaye bathumele ii-imeyile. Ndiyithandile iminyaka emi-2 nesiqingatha endiyisebenzele i-ExactTarget! NgoMvulo, mna
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Ngale ntsasa, uMark Gallo (umongameli kaPatronpath) wabelane nenqaku elikhulu kwiThe Indianapolis Star malunga nembali kunye neenjongo zeTechpoint, iqela elikhuthaza itekhnoloji yengingqi apha e-Indianapolis. Ngokumangalisayo, ndamenywa ngabantu abanobubele kwizisombululo zeBitwise ukuba ndibandwendwe lwabo kwingqungquthela yeTechPoint ngalo Lwesihlanu. Enkosi kuRon noKim ngesimemo! UMark undinike usuku lokuya kuzimasa kwaye ndiyalixabisa kakhulu. Le 'incinci